भुकेर पनि नगर्नुहोस् यी १० कामहरु, मृगौला बिगार्न सक्छ । – Yuwa Aawaj
चैत्र १५, २०७७ आइतबार 2664
Prevफर्सीको मुन्टा र ग’टा खानुको अचम्मैको फइदाहरु ।
Nextसरकारी गाडीमा आफन्त सरर, दुरु’पयोग गरेको भन्दै स्थानीय युवा द्वारा गाडी नि’यन्त्रण !
१० बच्चा जन्माएकी भनिएकी सिथोली गर्भवती नै नभएको खुल्यो !
रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा नदिएको आ’रोपमा प’क्राउ परेकी सरस्वती छुटिन् ।